Mampiharihary ny fironana momba ny fizahantany pelaka manerantany ny tsena fitsangatsanganana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Mampiharihary ny fironana momba ny fizahantany pelaka manerantany ny tsena fitsangatsanganana
Septambra 8, 2012
Ny fikarohana vaovao dia manambara hoe aiza no toerana itodiana no tena manintona ny iray amin'ireo demografika sarobidy indrindra - ny tsenan'ny dia, lesbiana, bisexual ary transgender (LGBT).
Ny Royaume-Uni sy Londres no tena manatsara ny laharana amin'ity taona ity izay navoakan'ny Out Now Business Class www.OutNowBusinessClass.com - fikambanana mpandray anjara amin'ny tambajotran'orinasa LGBT manerantany.
Tafatsangana i Frantsa, saingy nidina i Paris - ary nandatsaka laharana roa i Etazonia noho ny toerana fizahan-tany LGBT irina tamin'ny 2013.
Ny valiny dia ny angona voalohany navoaka tamin'ny fanontana "Out Now Global LGBT2020 Report momba ny fizahan-tany" 2013, izay haseho tanteraka amin'ny World Travel Market (WTM), hetsika manerantany ho an'ny indostrian'ny fizahantany, any London amin'ity volana novambra ity.
Sambany, misy ihany koa ny sehatra fampirantiana ho an'ny sehatra LGBT - "Kilasim-pivoarana ankehitriny" ao amin'ny WTM, izay hampiakatra be ny fahitana, fidirana amin'ny tsena ary ny tambajotram-pifandraisana ho an'ireo mpampiranty - toy ny zotram-piaramanidina, toerana itodiana, hotely, mpandraharaha fizahan-tany, manam-pahaizana momba ny varotra, sy ny hafa. Ny pavilion LGBT ao amin'ny WTM dia hampitombo be ny tambajotram-pifandraisana B2B, ahafahan'izy ireo manitatra ny fahazoan'ny mpanjifa ary manitatra ny anjara fizahan-tany ataon'izy ireo manokana momba ny fizahan-tany LGBT manerantany.
Ny talen'ny fampiratiana Reed Travel World Travel Market Simon Press dia nilaza hoe: "Faly aho fa afaka nanambara ny fanombohana ny Out Now Business Class ao amin'ny WTM. "Ny tsenan'ny LGBT dia mitombo hatrany ny lanjan'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany, ary mahafinaritra ny fahafahan'ny WTM manolotra làlana amin'ny fanomezana tombony ho an'ny orinasa ho an'ny sehatra manan-danja mitombo eo amin'ny tsena."
Ny fikarohana LGBT2020 farany dia mampiseho fa be ny asa fampandrosoana hataon'ny orinasa.
Nifindra i Frantsa - ary izy izao no firenena tadiavina indrindra amin'ny ankamaroan'ny 6% amin'ny indostrian'ny fizahantany manerantany antsoina hoe LGBT.
Very toerana voalohany i Etazonia, nianjera tamin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo tamin'ity taona ity. Iray amin'ireo fanatsarana lehibe indrindra raha nitodika tany amin'ny 2013 ny indostria - ary toa nilatsaka tamin'ny lalao olympika - dia ny UK, izay nifindra tamin'ny toerana fahefatra ka hatrany amin'ny faharoa.
Ny firesahana ny krizy Eurozone dia tsy nahasakana ireo mpandeha LGBT izay nanosika an'i Gresy hiakatra ny laharana mba hiseho amin'ireo toerana pelaka folo tena tadiavina indrindra eran-tany. Niakatra ihany koa i Italia raha nandatsaka toerana roa i Espana.
Out Now no manam-pahaizana momba ny tsena LGBT manerantany manerantany, ary ny tatitry ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany LGBT2020 vaovao ho an'ny 2013 dia vokatry ny angona fikarohana nandritra ny 3 taona nangonina avy amina olona maherin'ny 100,000 tao amin'ny firenena 24. Ny santionany dia noraisina tamin'ny fiteny 12, ary amin'ity taona ity dia misy ny angona fampitahana ho an'ny mpamaly avy any Israel, India ary Torkia.
Ireo nanontaniana dia nanontaniana hoe iza amin'ireo firenena sy tanàna tanisaina marobe izay tian'izy ireo hotsidihina ao anatin'ny 3 taona ho avy.
Orinasa lehibe ny fizahantany LGBT. Tamin'ny 2012, ny fikarohana nataon'ny Out Now dia nampiseho fa ny fandaniana fizahan-tany ataon'ny olona LGBT manerantany dia hihoatra ny $ 165 miliara.
Out Now dia hamoaka ny valin'ny fikarohana farany momba ny sandan'ny tsena amin'ny 2013 ao amin'ny WTM amin'ity volana novambra ity ary mampiantrano pavilion fampirantiana LGBT natokana ho an'ilay hetsika antsoina hoe "Out Now Business Class." Anisan'ireo mpampiranty voamarina ny biraon'ny marketing fizahantany avy any Berlin, Helsinki, Pridetours avy any Israel, ary THE OUT NYC - hotely lasibatra sy pelaka avy any New York.
Ny pavilion LGBT vaovao ao amin'ny WTM dia natao manokana hanasongadinana ireo mpilalao indostrian'ny fizahan-tany izay manolo-tena indrindra hanitatra ny anjarany amin'ity tsena mitombo ity. Iray amin'ireo mpampiranty - Berlin Tourismus - dia nahita ny fiakaran'ny LGBT2020 tamin'ny toerana 4 tamin'ity taona ity, vokatry ny fifantohan-dry zareo amin'ny varotra stratejika mifototra amin'ny tsenan'ny dia an'ny mpanjifa LGBT.
Mikasika ireo tanàna pelaka malaza indrindra, New York dia nijanona tamin'ny laharana voalohany tamin'ny taona faharoa. Na izany aza, ny NYC dia notoherin'ny Rio de Janeiro teo amin'ny laharana faharoa, izay nampiakatra toerana iray ary nanosika an'i Sydney hidina amin'ny laharana fahatelo.
Nifindra talohan'i Paris i London tamin'ity taona ity, izay efa nianjera tamin'ny toerana iray ao aorinan'ny toerana tiako indrindra gay, San Francisco.
Darren Cooper, Senior Consultant ao amin'ny Out Now monina any London, dia nilaza fa ny valiny dia misy tsy ampoizina sy antso fanairana vitsivitsy.
“Ny tahirin-kevitra momba ny fizahantany LGBT2020 farany avy amin'ny Out Now Business Class dia iray amin'ireo famoahana andrasana indrindra tamin'ny taona; rehefa manara-maso ny fironana momba ny fizahantany LGBT manerantany tokony ho fantatry ny indostria isika raha te hanana toerana tsara amin'ity tsena mety ahazoam-bola ity, "hoy i Cooper," Amin'ity taona ity, toa afaka mandray trosa maromaro ny ekipa GB satria i Londres sy UK koa nahita fanatsarana lehibe teo amin'ny fangatahan'izy ireo an'ity tsena ity. Rehefa dinihinao ny haben'ny tsenan'ny tsenambarotra LGBT, ny fiakarana na hidina toerana dia mety hidika amin'ny fahasamihafana an-jatony tapitrisa amin'ny vola miditra amin'ny fizahan-tany mankany amin'ny toerana iray.
Nanentana ny indostria i Cooper mba hiasa ankehitriny mba hahazoana toerana amin'ny toerana anaovana fampirantiana LGBT amin'ny World Market Market amin'ity taona ity.
"Ny maha-zava-dehibe ny fifandraisana amin'ny raharaham-barotra amin'ny fampiharana ny paikady marketing LGBT mahomby dia tsy azo hamaivanina," hoy i Cooper, "amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa manana kalitao tsara miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka mety ihany - avy amin'ny haino aman-jery LGBT, mpandraharaha fizahan-tany, biraon'ny marketing mahazatra. , hotely, seranam-piaramanidina, manampahaizana manokana momba ny varotra LGBT, ary tambajotran-tserasera hafa izay antenain'ireo maniry hampitombo ny anjarany amin'ny tsena hahomby. Ity dia tsena ahazoam-bola be tombo-tsoa ho an'ireo izay mandray ny olana mba hahitsiana azy. Betsaka ny valisoa ho an'ireo izay manao izany, ary manantena izahay ny hiara-hiasa amin'ireo mpampiranty anay rehetra amin'ny WTM amin'ity taona ity hanitatra betsaka ny valiny avy amin'ny tsena LGBT manerantany. "
Ny sehatra fampirantiana Out Now Business Class ao amin'ny WTM dia azo ampiasaina amin'ny sehatra tsy miankina sy miaraka amin'ny fotoana ifanakalozana trano heva. Voafetra ny habaka ary azo iarovana amin'ny alàlan'ny fifandraisanao amin'i Darren Cooper ao amin'ny Out Now [email voaaro] .
Ny data rehetra dia zon'ny mpamorona 2012 Out Now - ary azo averina am-pirinty raha omena amin'ny alalàn'ny trosa rehetra.
Ho an'ny latabatra feno dia tsidiho ny http://www.outnowconsulting.com/latest-updates/press-centre/most-popular-gay-tourism-hotspot-for-2013-revealed.aspx.